Madaxweynaha Somaliland oo ku dhawaaqay arin ay soo dhaweeyeen Shacabka Soomaaliland. — CAASIMADA
Home WARARKA MANTA Madaxweynaha Somaliland oo ku dhawaaqay arin ay soo dhaweeyeen Shacabka Soomaaliland.
Madaxweynaha Somaliland oo ku dhawaaqay arin ay soo dhaweeyeen Shacabka Soomaaliland.
Previous articleDEGDEG:Dad shacab ah oo lagu xasuuqay Beledxaawo & Xiisad ay ka abuurtay degaanka.
Next articleSAWIRO: Ra’iisul Wasaare Kheyre oo Shacabka Marka kula Hadlay meel fagaae ah
Lix go’aan oo ay qaadatay dowladda Farmaajo oo aan horay tariikhda...